USA: rezenisi rekugadzira mabhandare - AFRIKHEPRI
USA: reisensi yekuita mabhiriji
MuUnited States, mazana emakumbo evanhu vanobva kuAfrica yeSouth Africa anonyanya kugadziriswa mukurwisana ari kukurudzira kupesana nemitemo ichangobva kudiwa inoita kuti vadzidziswe vakareba kwenguva yakareba uye inodhura.
Iko kune "ye" ...
Iye zvino, mune makumi mana zviti, chero mushure mutsvuku achafanirwa kubata reisense pasi pekutambudzika kwekubhadharwa kusvika ku2500 USD pamhosva. Iri reisheni, rakasikwa pasi pekumanikidzwa kwevamiriri vebvudzi rekuveura bvudzi, chinangwa chekutarisa hutsika hwehutano uye yehutano hwehutano hwevanyori. Saka vakashongedzeri saka, mukururama kwose, vanozviisa pasi pamitemo yakafanana neyese vabati vehodzi neveauticians.
Kuwedzera huwandu hwenyika kuburikidza nekudzidziswa chinhu chakanaka pachako. Chokwadi, tsika hakusi pasina mukana nekuti kwokuruka kunogona kukonzera kuonana Kurwara (chakaita zvokugadzirwa tambo) uye alopecia nokuda vanokakata bvudzi uye nekusagona kuchenesa vhudzi mu mhotsi dzangu uye weaving .
... asi kunewo "zvinopesana"!
Akaunganidzwa pamwe chete (kunyanya Braiding Freedom), vabati vehove vakarongeka uye vanokwira kuCrenel. Vanyori varo vezvematongerwo enyika vakatozobudirira kubvisa kana "kujekesa" kubvumirwa kweisensi iyi kune dzimwe nyika (Washington, New York, Utah, Arkansas) ine nharo dzinoverengeka.
Kuchengeteka: Kubata ibasa rakajeka, rakachengeteka. Braiders haashandisi kururamisa kana kumisa makemikari. Hazvina kunyorova vhudzi romutengi.
Tsika: Braiding ndiyo tsika inotsika, inopiwa kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa kubva pauduku. Nguva yekugadzirisa inoitawo hukama hwehukama, ndiyo nzira yekushandisa nguva yakakodzera pakati pevakadzi: tinoseka, tinokurukura maawa.
Zvakaitika: hapana VAE system (kusimbiswa kwechiitiko chakawanikwa) yaizotendera avo vanogona kuratidza tsika yemakore akati wandei kubatsirwa kubva kuisensi.
Iko mari uye nguva yezvidzidzo zvekuwana iyi reisense inofungidzirwa zvakanyanya. Zvichienderana nehurumende, izvi zvakasiyana pakati pe40h uye 2ans uye minerval yemamwe zvikoro zvepachikoro anogona kuenda ku20000usd.
Chikamu chedzidzo: kazhinji marezinesi aya anoda kufanana kwediploma kubva kuchikoro cheAmerican. Vatorwa vazhinji vemuAfrica havana chete murairidzo wemitauro neiyi nhanho yedzidzo.
Verenga zvakawanda pane blog yangu: Beauty Panafrican
Braids: an African ancestral art
Chengeta kurasikirwa kwevhudzi nemafuta ekunyama
Tarisa Detroit (2017)
TENGA IZVO PA AMAZON
Igovera ZVAKO ZVAKAWANDA PAZVIRI
Dzvanya pazasi kuburitsa chinyorwa
Afrikhepri Foundation Sur Upwere hwatenzi - Rugwaro (2018): "Iyo yakasarudzika rwendo rwemangwana tenzi wemweya: Iyo yakanaka documentary yekuona!" Jul 6, 01:32
Afrikhepri Foundation Sur Hondo yeSeed - Rugwaro (2016): "Isu tichava chete ne GMO chikafu kubva kune transgenic zvinomera mukati memakore gumi nemashanu!" Jul 6, 01:27
Afrikhepri Foundation Sur Tarisa iyo yakaenzana 2 (2018): "Bhaisikopo rakanaka kuona!" Jul 6, 01:21